Momba anay | Akanjo Hangzhouqiangwei CO., LTD
Fihaingoana mitokana iray
Akanjo porofon'ny masoandro
Akanjo Hangzhouqiangwei CO., LTD
Hangzhouqiangwei akanjo Co., Ltd.dia miorina ao amin'ny tanàna mahafinaritra any Hangzhou, faritanin'i Zhejiang. Niorina tamin'ny 1997 niaraka tamin'ny renivohitra voasoratra 11 tapitrisa yuan. Maherin'ny 600 ny andiana fitaovana, ary ampiarahina amin'ireo fitaovana fitafy nohafarana avy any ivelany (toy ny: milina fanjairana haingam-pandeha, milina fanaronana adhesive, fanety herinaratra any Etazonia). Nivoatra ho lasa andiana endrika, famokarana, varotra toy ny iray amin'ireo matihanina famokarana fonosana matihanina. Ny orinasa dia manana mpiasa mihoatra ny 600, miaraka amin'ny velaran-tany 10.000 metatra toradroa sy 1,2 tapitrisa setran'ny famokarana isan-taona. Orinasa iray hafa koa no nanangana teo ambanin'ny orinasa mpanao amboradara, ny orinasa tsy mpanao vy.
Ny orinasa dia nahazo ny mari-pahaizana manokana momba ny fiarovana ny fitafiana amin'ny fiarovana ny asa sy ny fahazoan-dàlana hamokarana vokatra indostrialy, ny Zhejiang Security Production Supervision Administration, ary ny kaomisiona momba ny famokarana fitafiana notendren'ny Komisiona Zhejiang sy ny varotra. Izy io koa dia orinasa AAA credit banky sy orinasa fanamarinana rafitra kalitao ISO9001. Ny maodelim-pitantanana ny orinasa dia lasa miharo sy manara-penitra.
Ny andiany "TRANO" anaovan'ny orinasa matihanina vokarin'ny orinasa dia manana ny toetran'ny fanoherana ny abrasion, ny fanasana mora ary ny fahamainan'ny loko matanjaka. Ampahafantaro ny rafitra rindrambaiko CAD akanjo iraisam-pirenena farany farany ho an'ny famolavolana matihanina. Amin'ny fizotry ny famokarana, araho tsara ny fenitra nasionalin'ny "GB 12014-2009 Akanjo manohitra ny static" sy ny "GB 8965.1-2009 Flame Retardant Clothing".
Ny vokatr'ilay orinasa dia aondrana any amin'ny faritra rehetra amin'ny firenena sy amin'ny sehatra rehetra. Namokatra imbetsaka tamin'ny fomba isan-karazany ny fitafiana matihanina ho an'ny orinasa lehibe sy salantsalany manodidina ny 1.000 amin'ny herinaratra, solika ary petrokimia, vy, famokarana fiara, seranan-tsambo, sigara sy indostria hafa. Derain'ny mpanjifa.
Telefaona ： 0086-13868068082
Adiresy ： Tanànan'ny Da 'an, làlana Chongxian, distrikan'i Yuhang, Hangzhou, Sina